Fikradda naqshadaynta ee 24 Wanaagsan ee loogu talagalay ragga iyo dumarka - Fikradaha farshaxanka
Fikradda naqshadaynta ee 24 Wanaagsan ee loogu talagalay Ragga iyo Haweenka
Sonitattoo November 24, 2016
Dad tiro yar ayaa xusuusta sawirada "ringtone" marka ay lumiyaan qof muhiima gaar ahaan noloshooda. Shakhsiyaadka kale waxay ku dhiirrigelin karaan inay sawirro ku dhejiyaan si ay u xasuusiyaan waqti gaar ah noloshooda.
1. Lammaanaha Tattoo Roobka ah
2. Tunxiidka Wareega
Helitaanka wax-ku-oolka ah ee loo yaqaan 'tattoos' waa waxa aad u baahan tahay haddii aad leedahay lammaane kaasoo sameeyey ama aan weli sameynin.
3. Wadaagada Tattoo Raadinta
Sharciyeynta helitaanka giraanta #tattoo waxay noqotey waxa ka dhiga tattoo kan aan caadiga ahayn. Waqti dheer ka hor, waxaa jiray dad ah oo ka baqay in ay soo galaan laakiin maanta, waxaa laguu xaqiijinayaa in talefoonkaaga giraangirta si fiican loo samayn karo.
4. Tattoo Raadin Weyn
Sawirada quruxda badan waa qurux badan. Markaad ka fekereyso inaad is guursataan ama aad ku mashquulsan tahay ama aad ku mashquulsan tahay, tattoo tani waxay noqotey waxaad samayn karto. Kharashka ku baxaya tan la awoodi karo marka la barbardhigo qaar ka mid ah tattoosyada qallafsan
5. Tattoo garaac leh
Markaad ka fekereyso in aad hesho tattoo ama haddii kale, waa inaad doorataa meesha aad ka heli karto jirkaada. Si kastaba ha noqotee, tattoosku waa mid ka mid ah sawirrada yar ee laga yaabo inay leeyihiin meeleyn gaar ah.
6. Tattoo qurux badan
Sidee u jeceshahay tattoo sidan oo kale ah? Naqshadeynta # waa mid fudud oo weli, aad u qurux badan si aad u qadariso. Tani waa sababta aad u heli karto tattoo ringtarka sahlan.
7. Tattoo sir ah
Hubi inaad diyaar u tahay in aad eegto naqshado badan kahor intaanad qaadan karin. Tilmaamaha sarifka badani waxay ku yimaadaan qaabab kala duwan, waana waajibaadkeedu inaad hubiso in naqshadeyntaada gaarka ah loo qaabeeyo sida aad u rabto.
8. Tattoo khaas ah
Waxaa jira xoogaa muhiim ah oo aad u baahan tahay inaad qaadato ka hor intaadan lahayn tattoo gaar ah. Markaad diyaar u tahay inaad si fiican ugu roonaato tattooaga, waxaa muhiim ah inaad la timaadid lammaanahaada si aad u dooratid naqshad sameynta isbedelka guud.
9. Tattoo garaacid cajiib leh
Sawirada quruxda badan ee quruxda badan looma dayacin karo mar kasta oo aad ku soo aragto. Waxaan aragnay haweenka qaata darajooyinka sidan oo kale ah. Tani waa sababta aad u aragtay dad badan oo xaas leh iyo dumarka dooranaya nooca tattoo ah.
10. Tartoo garaac masraxa
Haddii ay dhacdo in aad ka walaacsan tahay nooca tattoo-gaaga ah ee aad raadineyso, waxaad waydiisan kartaa su'aalo iyo xitaa internetka si aad u hubiso in doorashadaadu tahay mid kaamil ah.
11. Tattoo cirif leh
Tattoos calaacal badan oo qurux badan ayaa ku fiican. Miyaad jeceshahay sida faraha loo eego? Waxaad xariifin kartaa qaababkaaga tattoo gaar ah sidan oo kale
12. Tattoo Cute Cajiib ah
13. Tattoo fara badan
Run ahaantii, qof kasta oo arka sawirka tattoo ee tikidhada ayaa jeclaan lahaa. Ma ahan in keligaa lagaa tago markaad aragto naqshadahan. Sidee baad u rabtaa naqshaddaada inay u ekaato?
14. Tattoo ugu fiican
15. Tattoo qurux badan oo qurux badan
Waxa ugu muhiimsan ee aad u baahan tahay inaad tixgeliso, haddii tani ay tahay tattooada ugu horeysa, waa haddii uu ku dhajin doono meesha aad u baahan tahay. Meeleynta tattoo-gaaga ayaa ah waxa qeexaya qaabka aad u quruxda badan u noqon lahayd ka dib markaad sawirto.
16. Wanaagsan Raadinta Arooska Tattoo
17. Dharbaaxada xayawaanka
Qaar ka mid ah shaqsiyaadka, xadka ciqaabtu waa marka ay fariistaan ​​shaatiinka si ay jidhkooda ugu soo qaataan. Si kastaba ha noqotee, tattoos giraanta ah ee loogu talagalay lovers ma qaadan wakhti ka hor inta aanay ku qorin jirka. Markaad awoodi kartid inaad dooratid sawirrada sida tan, waad ogtahay inaad ku faraxsan tahay.
18. Tattoo-ga lagu dhajino
Qaar ka mid ah Shakhsiyaadka waxay yiraahdeen in gacmahooda, lugaha hoose, cagaha, feeraha iyo lafdhabarta dhulka, ay yihiin dhibcood oo dhaawaca ugu badan. Si kastaba ha noqotee, dhejinta sawirkaaga giraanta ayaa noqon karta mid ka mid ah xulashooyinka saxda ah ee aad adigu samayn karto.
19. Tattoo fudud ee fudud
20. Tartoo Tattoo Cool
Waxaa laga yaabaa inaad rabto in aad ogaato in farshaxanka tattoo uu gashado gacmo gashan marka la eego xaqiiqda ah in tattoogu uu yahay mid furan ilaa uu ka bogsado. Sidaa darteed, marka ay gaarayaan maqaarkaaga, waxay u baahan yihiin inay hubiyaan in ay daboolaan gacmahooda, si aanay u jirin suuxdin iskutallaab ah.
21. Lammaanaha Tattoos
Tani waxay u tahay nabadgelyadaada sida badan. Marka ay kufinayaan hubinta shakhsiyaadka waxaa jiri kara dhiigga maqaarkaaga, sidaas darteed waxay u baahan yihiin inay iska ilaaliyaan in ay maqaarkooda ka ilaaliyaan dhiiggaaga.
22. Tattoo Friends saaxiib Tattoo
23. Tattoo Wareeg ah
Marka daaweyntu ay dhammaato, waxaad arki doontaa raaxeysiga gobolka, waxaa laga yaabaa in uu aad u sarreeyo. U kuurgal inaad bararka qaarkood kuugu yaraanayso afar iyo labaatankii saacadood markii jidhkaagaagu dayactirayo. Tani maaha wax culays ah waana mid caadi ah.
24. Tattoos wacan
shaatiinka shiidansawirada malaa'igtataraagada kubbaddawaxay jecel yihiin tattoosku dhaji tattoostattoosTattoo Feathersawir gacmeedgaraacista gacmahatattoos qorraxdatattoos qosol lehJoomatari Tattooskoi kalluunkatattoos eagletattoo maroodigatattoo tilmaantattoo indhahashimbir shimbirtattoos sleevegadaal u laaboTartoo ubax badanfikradaha tattoojimicsiga bisadahatattoos ubaxDhaqdhaqaaqaTattoo infinitysawirrada raggatattoos saaxiib saxa ahcalaamadaha calaamadaha ayaa calaamad u ahlaabto laabtatattoos qoortatattoos iskutallaabtatattoos gacantanaqshadeynta mehndiTattoos Wadnahalammaanahatattoos taajkiitattoos qabaa'ilkatattoo biyo aharrow Tattoohenna tattootattoos moonwaxaa la dhajiyay tattooslibto libaaxTilmaamta jaalaha ahtattoo ah octopustattoos cagtamuusikada muusikadatattoo dheemansawirada gabdhaha